Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGeri
Ikhabhathi epholileyo enombono wesigidi seedola. Isilungiselelo esigqibeleleyo sokuphumla ngokupheleleyo. Indawo enkulu yokuloba ngeempukane okanye ukuhamba nje emlanjeni. Hlala kwidesika okanye kumlilo wenkampu kunye nesiselo osithandayo ukuthomalalisa. Akukho WiFi okanye TV. Inkonzo yeseli inokuba mabala. Yindawo entle yokucima.
Iindwendwe ziyakonwabela ubumfihlo bekhabhini yonke. Amagumbi amabini okulala aneebhedi zokumkanikazi kunye neebhafu ezimbini ezigcweleyo. Ikhitshi lixhotyiswe ngezitya, izinto zokupheka kunye neziqholo ezisisiseko. Igrill yegesi iyafumaneka.
Ikhabhinethi ibekwe phezu koMlambo i-Escanaba. Kukho izindlu ezininzi kule ndawo. Iindwendwe ziya kuba malunga neekhilomitha ezingama-20 ukusuka eGladstone nase-Escanaba apho zinokubeka khona iimpahla.
Ukubhalelana ngefowuni yeyona nto ilungileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cornell